Kumele basizwe ukudlulisa osekwenzekile abadlali beChiefs abaphoxa bephindelela - Impempe
Kumele basizwe ukudlulisa osekwenzekile abadlali beChiefs abaphoxa bephindelela
December 17, 2020 Impempe.com
Empilweni yami ngake ngaphoxeka ngale ndlela yokuthi ngangingafuni nokuphuma endlini. Ngaleso sikhathi ngangizithola ngingafuni nokukhuluma nabanye ozakwethu emsebenzini.
Abantu abangazi njengomuntu okhululekile nohlale ezixoxela ehleka, babemangala nje ukuthi kwenzenjani. Angizogxila ekuchazeni ukuthi yini le eyayingiphoxe kangaka kodwa amasonto amabili wonke ngangingemina. Kwathi uma kuhamba isikhathi ngabona ukuthi ngiyazihlukumeza futhi bambalwa kakhulu abantu ababenolwazi lokuthi ngiphoxwe yini. Ngazizwa ngidinwa nje ukuthi eminyakeni yobudala enganginayo ngaleso sikhathi, ngangihluleka ukudlulisa isimo engangingeke ngisasishintsha.
Yilaphoke engakhetha khona ukuthi ngizivuthulule ngikhohlwe okwase kwenzekile, ngoba akukho engingasazokushintsha ngakho. Ngazitshela ukuthi futhi anginandaba nokuthi kukhona owaziyo ukuthi ngabe ngiphoxwe yini, ngizoqhubeka nempilo ngoba kuningi kakhulu engikuphilelayo. Nebala impilo yaqhubeka ngakhohlwa yikho konke.
Okwenza ukuthi ngiqale le ngosi kanje yisimo engisibona kwiKaizer Chiefs njengamanje. Empilweni yami yokubhala ngonobhutshuzwayo angikaze ngibone Amakhosi engazethembi ngendlela okwenzeka ngayo njengamanje. Lonke nje iqembu libukeka lilahlekelwe ukuzethemba futhi lingazi ukuthi yini okufanele liyenze kule sizini okungekudala iqalile.
Ngokubona kwami abadlali beChiefs baphoxeke ngokweqile ngemuva kokwehluleka ukuwina isicoco seligi ngesizini edlule. Ngazi kahle ukuthi akumnandi ukuhlala esicongweni isizini yonke bese ekugcineni ungayiwini indebe. Ngiyaqonda ukuthi abadlali beChiefs bezwe ubuhlungu obukhulu ngesikhathi kwenzeka lokhu.
Nokho manje okumele bakukhumbule ukuthi impilo iyaqhubeka ngakho kumele bakhohlwe yisizini edlule. Kufanele bazi ukuthi badlalela iqembu elihlonishwayo eNingizimu Afrika ngakho kumele bazame ukuwina ukuze bangazitholi besehlazweni elikhulu kunaleli abazithole bekulona ngesizini edlule, behlulwa yisicoco ekugcineni.
Njengamanje akekho umdlali weChiefs engingathi udlala kahle. Kuyinhlakanhlaka nje engingakaze ngiyibone. Angiyibalike eyamaphutha enziwa wukaputeni wayo u-Itumeleng Khune. Ngicabanga ukuthi naye uyazibuza noma eseyedwa ukuthi ngabe konakelephi kuyena. Angifuni ukucabanga ukuthi la maphutha uwenza ngabomu yize sekushayisa amakhala ukwenza kwakhe amaphutha kulandelana.
UKhune esimaziyo yilo owinela iqembu imidlalo eyedwa, ngobuqhawe bakhe bokubamba ngisho impukane emapalini. Kodwa lo Khune esisambonile selokhu kuqale isizini unomthelela omkhulu ekutheni iqembu laseNaturena libhacaze.
Uma ungangibuza nje ukuthi yiliphi iqembu elingashaywa yiChiefs njengamanje, ngingasho kugcwale umlomo ukuthi alikho. Izowina kanjani le Chiefs yakhona njengoba ihluleka wukushaya amagoli? Abageji banomuntu phansi oLebogang Manyama, Khama Billiat noNkosingiphile Ngcobo.
Kuyihlazo ukuthi iqembu elikhulu njengeChiefs lisakwaze ukuwina umdlalo owodwa nje vo kweyisishiyagalolunye eliyidlalile kuyo yonke imiqhudelwano kule sizini. Kuyavuza nje emuva kwiChiefs nokushiya imibuzo ukuthi izowina uma sekunjani.
Ngicabanga ukuthi umqeqeshi uGavin Hunt akazi naye ukuthi kumele enzeni manje ukuze iqembu liwine. Akukwazi phela ukuthi iqembu elilale isibili kwiligi ngesizini edlule selingamane libhacaze kanje. Ngabe kukhona okufihlwayo esingakwazi?
Angifune kuqagela kodwa engingaluleka ngakho abadlali beChiefs ukuthi bakhohlwe osekwenzekile, bahlale phansi badingide indaba yokuthi yini abafuna ukuyenzela iqembu. Akekho omunye ongashintsha izinto kwiChiefs ngaphandle kwabadlali bayo. UHunt angakwenza okumele akwenze kodwa ekugcineni akuyena ongena enkundleni ngosuku lomdlalo.
Uma ungakhombisi ukuthi ukuphoxeka kwakho ngenxa yesimo esesidlulile kukudla kangakanani, yilapho ukwazi khona ukuqhubeka nempilo. Kulele kubadlali beChiefs ukuthi benze abathandi bakanobhutshuzwayo bakhohlwe ukubhacaza kwabo emidlalweni edlule. Abavuke bazithathe bakhohlwe ukuthi yini abahluleke ukuyenza ngokwedlule. Shwiii
Previous Previous post: Ufisa bavale ngokuwina uWilliams weSuperSport esefomini enhle kulezi zinsuku
Next Next post: ‘Kumele sibambe le ndlela esidlale ngayo neSuperSport singabe sisayidedela,’ kusho uManyama weChiefs